Taxi သမားရဲ့ လူသတ်​ပစ္စည်းလုဖို့ ကြံစည်​တာခံရခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု..။ အားလုံးသတိထားကြဖို့ ဒီအဖြစ်ပျက်ကို ရှယ်ပေးကြပါ။ - Apannpyay
Home > ပြည်တွင်းသတင်း > Taxi သမားရဲ့ လူသတ်​ပစ္စည်းလုဖို့ ကြံစည်​တာခံရခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု..။ အားလုံးသတိထားကြဖို့ ဒီအဖြစ်ပျက်ကို ရှယ်ပေးကြပါ။
Taxi သမားရဲ့ လူသတ်​ပစ္စည်းလုဖို့ ကြံစည်​တာခံရခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
“ကားသမားက ..ကျမ၊​ဖေ​ဖေနဲ့ သမီး​လေးကို.. လူသတ်​ပစ္စည်းလုဖို့ ကြံစည်​တာခံရပါတယ်​..”
ကျမ ခါး​ကြောညပ်​လိုက်​တာ ည​နေ ၅နာရီ ..​တော်​​တော်​ ဆိုး​တော့ပြဖို့ စံပြ​ဆေးခန်း စုံစမ်းလိုက်​ပါတယ်​.”.သမိုင်းက ဆရာဝန်​လာ/မလာ မ​သေချာတဲ့”ဒါနဲ့ ​ကျောက်​​မြောင်း ​ဆေးခန်းက ည ၇နာရီ ပါ​မောက္ခ ဦးသန်းတိုး ကိုပြဖို့ booking ရပါတယ်​.. . ပြပြီး တခါတည်း​လေ့ကျင့်​ခန်းပါ လုပ်​ရ​တော့ ၉နာရီအဲ့အချိန်​…Taxi ငှါးပါတယ်​..
၃၇ဂိတ်​(၆ထပ်​ရုံး)ကို ပို့ခိုင်း​တော့ ဂိတ်​သိမ်းသွားပါပြီ .. . ဒါနဲ့ ကားသမားကို ​မှော်​ဘီ ထိ ငှါးလိုက်​ပါတယ်​…ကားသမားနဲ့​ဈေးတည့်​​တော့ …. ဆူး​လေက​နေတဆင့်​ သမ္မတ ရုပ်​ရှင်​ရုံ …အဲ့က​နေမှ တဆင့်​ အထက်​ပုစွန်​​တောင်​..စက်​စမ်း ..သင်္ကန်းကျွန်းဖက်​ ​ခေါ်သွား ပါတယ်​…​ဖေ​ဖေက ရန်​ကုန်​ မှာ​ကျောင်းတက်​ခဲ့သူ …ဘယ်​​ရောက်​​နေတယ်​ ဆိုတာ တလမ်းလုံး​ပြောလာတာ​တောင်​…အတင့်​ရဲလိုက်​တဲ့ …ငရဲ ကျမယ့်​​ကောင်​…
​မေး​တော့ “အပြန်​ သူတစ်​​ယောက်​တည်း မို့ သင်္ကန်းကျွန်း အ​ဖော်​ ဝင်​​ခေါ်တာတဲ့…”ထားလိုက်​​တော့.. .​ခေါ်ပါ​စေ…
သူလဲ အပြန်​အတွက်​​ပေါ့..သူငယ်​ချင်း ​ခေါ်ပြီး ​မောင်းလာတယ်​..သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း…ပင်​လုံအိမ်​ရာ.. ပြည်​​ထောင်​စုရိပ်​မွန်​ …
​နေရာ​တွေကို ဖြတ်​…​နောက်​ဆုံး (၈၇) ကား​တွေ ဂိတ်​ထိုးထားတဲ့​နေရာ…​​ရောက်​​နေပြီ မသင်္ကာ​တော့ဘူး…
တပည့်​​ကျော်​ ဇင်​လင်းကို ကို လှမ်း​မေးတယ်​..သူ့​ဖေ​ဖေ ..က….ကား​ထောင်​ပြီး taxi ဆွဲ​နေ​တော့ လမ်းကျွမ်းတယ်​..သူကလဲ သူ့​ဖေကို ​မေး​နေချိန်​ …ကျမတို့က ကား​မောင်းတဲ့ အ​ကောင်​ကို ​မေးလိုက်​ပါတယ်​”မင်း ခု ဘယ်​လမ်းက​နေသွားတာလဲ” လို့ ..”လူပြတ်​တဲ့လမ်း​တွေချည်းပါလား” လို့ ​ပြော​လိုက်​တယ်​..”ကျ​နော်​ က ​ရွှေ​ပေါက္ကံ ဖက်​က သွားတာတဲ့”
​”​နေပါအုံး.. .​ရွှေ​ပေါက္ကံက​နေ ဘယ်​ဆက်​သွားမှာလဲ လို့​မေး​တော့ “ပုလဲမြို့သစ်​”တဲ့…ဒါဆို ​အောင်​မင်္ဂလာအ​ဝေး​ပြေး​ရှေ့က လမ်းမကြီးက​နေသွား​လေကွာ” လို့ “ခု အဲ့လမ်းမကြီး​ပေါ်ကို တက်​လိုက်​…ခု ​အောင်​မင်္ဂလာ ​ရောက်​ပြီလား” ​လို့ မေး​တော့
“​အောင်​မင်္ဂလာ ​ကျော်​​နေပြီ.”တဲ့…”ဘယ်​လို …​အောင်​မင်္ဂလာ​ကျော်​​နေ​သေး…ပုလဲ မြို့သစ်​လဲ မ​ရောက်​ ဆို​တော့.. .မင်းက ခု ဒီ​နေရာက​နေ…လမ်းမကြီး​ပေါ် ထွက်​ရင်​ ဘယ်​နား​ရောက်​မှာလဲ …”လို့ ​မေးလိုက်​​တော့…”​ဇေကမ္ဘာ​ဆောက်​လုပ်​​ရေး..က​နေ ဖြတ်​မှာတဲ့…”ဘုရား​ရေ…ကျမသိတာ​ပေါ့ ..​ဇေကမ္ဘာ​ဆောက်​လုပ်​​ရေး ဝန်း ဆိုတာ လူအရမ်းပြတ်​တာ….​ပြောရင်း ဆက်​သွား​တော့ ​ရွှေ​ပေါက္ကံက​နေ တံတား​လေးကို ဖြတ်​ဖို့ အလုပ်​….​​မြောင်းတခုကို ဖြတ်​ထိုးထားတဲ့ တံတားက ကျိုး​နေတယ်​..ဖြတ်​မရ​တော့ ​မြောင်း​ဘေး တစ်​​လျှောက်​ကို ချက်​ချင်း ​ကွေ့လိုက်​တယ်​…
ညာဖက်​ကို​ပေါ့ ဘယ်​ဖက်​က အမှိုက်​ပုံကြီး… အမှိုက်​​ကောက်​လူငယ်​ နှစ်​​ယောက်​ရှိ​နေတယ်​.. အဲ့ဒီတော့ ညာဖက်​​ကွေ့ရတယ်​.ညာဖက်​က မှောင်​မိုက်​​နေတဲ့လမ်း..လူ​နေအိမ်​​တွေနဲ့အလှမ်း​ဝေး​နေပြီ …​ကွေ့မရဘူး.. ခဲဗြုတ်​​တွေ …သံတိုသံစ အပုံကြီးနဲ့..ပိတ်​​နေ​တော့ အတင်းတိုး​နေ​သေးတာ..ကိုယ်​​တွေ ဆီကိုလဲ ဇင်​လင်းကို ​ရော…သူ့​ဖေ ​ရောက ဖုန်းလာ​နေပြီ…Speakerဖွင့်​​ပေးထားလိုက်​တယ်​…”ဆရာမ …ဆင်း​တော့…​ရွှေ​ပေါက္ကံ​ရောက်​စရာ အ​ကြောင်းမရှိဘူး..​ဇေကမ္ဘာ​ဆောက်​လုပ်​​ရေး ဝန်းထဲက ဖြတ်​စရာကို အ​ကြောင်းမရှိတာ…တဲ့”
ကားသမား ကလဲ မူပျက်​​နေပြီ…အဲ့အချိန်​…ကျမနဲ့ ​ဖေ​ဖေ့ကို ​အော်​တယ်​..”ခင်​ဗျား တို့ လုပ်​တာ နဲ့ လမ်းမှားကုန်​ပြီတဲ့..”ဖုန်းထဲကလဲ ဦး​လေး က ပြန်​​အော်​တယ်​…​ဖေ​ဖေကလဲ ထ​အော်​​နေပြီ..”ဟ​ရောင်​…မင်း ကားတံခါး lock ချထားတာ..ဖွင့်​စမ်း…”ဆင်းမယ်​ ဆိုပြီး လုပ်​​တော့.. back ပြန်​ဆုတ်​ ..လာရာလမ်းပြန်​ထွက်​လာ​တော့ …ရပ်​ကွက်​ထဲက လက်​ဖက်​ရည်​ ဆိုင်​​လေးရယ်​ ကုန်​စုံဆိုင်​​လေးရယ်​ က ပိတ်​ဖို့စီစဉ်​​နေချိန်​ ဝိုင်းအုံကြည့်​​တော့ လန့်​ပြီးချ​ပေးလိုက်​တာ..
ချ​ပေးတာက လမ်းခွဲ​လေးတ​နေရာ… .”လမ်းမ​ပေါ်ချ​ပေးခဲ့မယ်​တဲ့..”.. “မလိုက်​ဘူး လို့…”ဆင်းခဲ့​တော့ ကုန်​စုံဆိုင်​​က မိသားစု​တွေက ဝိုင်းကူညီကြတယ်​..ဖြစ်​​ကြောင်းကုန်​စင်​ ​ပြောပြ​တော့… သူတို့မိသားစုက ​ပြောတယ်​…”အဲ့ဒါ တကယ်​ပဲ လမ်းမှားသွားလို့…တဲ့ကျမတို့ ခု ဒီလမ်းခွဲက​နေ ​ဟိုဖက်​မှာလဲ ​ဇေကမ္ဘာထဲဝင်​တဲ့တစ်​​ပေါက်​ရှိ​သေးတယ်​ တဲ့ …အထဲ​ရောက်​တာနဲ့ ​မှောင်​မည်း ​နေပြီး.. ၄​လောင်းပြိုင်​၅​လောင်းပြိုင်​​တွေ အသတ်​ခံထားရတဲ့​နေရာကြီး..တဲ့..
ဟိုတံတား​လေးကလဲ ကျိုး​နေလို့တဲ့မကျိုးလို့ ဖြတ်​လိုက်​တာနဲ့ ​ဇေကမ္ဘာထဲ ​ရောက်​ပြီတဲ့…”ဇင်​လင်းကို တို့ သားအဖကလဲ ​မှော်​ဘီ က​နေ လာကြို​နေပြီ…ကျမတို့ သားအဖနဲ့ သမီး​လေးလဲ… ​ဘေးကင်းသွားပြီ..အိမ်​ဦးနတ်​ ကလဲ အ​ဝေးတ​နေရာက​နေ ဖုန်းတဂွမ်​ဂွမ်​ဆက်​ စိတ်​ပူ​နေပြီ….ခု ည ၁၂ အတိမှ ​မှော်​ဘီ အိမ်​ကို ပြန်​​ရောက်​ပါတယ်​….
ကျမတို့ ကို တကယ်​ပဲ ကြံစည်​ခဲ့တာ…လူယုတ်​မာ…ကျမ မနက်​ဖြန်​.. ကညန က တဆင့်​ Owner ကို ရှာမှာပါ..အငှါး​မောင်းသူ ဖြစ်​​နေရင်​ သတိထားဖို့ အ​ကြောင်းကြားပါမယ်​.. အဲ့ကားက​နေ တခြားကား​ပြောင်း​မောင်းရင်​​တော့.. ? ? ?အားလုံး ပဲ သတိ / ဝီရိယ ထားကြပါ…ကျမက ခါး​ဆေးခန်းပြလာတဲ့ ဂီလာန၊ ကျမ ​ဖေ​ဖေက က​လေး​လေး ချီထား​တော့ … သင်္ကန်းကျွန်းမသွားခင်​ကတည်းက အကြံရှိပုံပါပဲ…
ကျမတို့ ​မြေးအဘိုး ၃​ယောက်​ ​သေ​ဘေးက သီသီ​လေး လွတ်​ခဲ့ပါတယ်​…တံတား​လေးကျိုး​နေတာကို ​ကျေးဇူးတင်​မိပါတယ်​…မနက်​/ည​တွေ ပဌာန်းရွတ်​…ဘုရားတရား လုပ်​​နေခဲ့မိတာ​တွေအတွက်​…. မမြင်​ရတဲ့ နတ်​​ကောင်းနတ်​မြတ်​​တွေကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​.. ….”အားလုံး ပဲ…Grab ကိုပဲ ငှါးစီးကြပါ…ကျမလို သတိလက်​လွတ်​မဖြစ်​မိပါ​စေနဲ့…အကယ်​၍.. .. ​ဖေ​ဖေသာ…ရန်​ကုန်​ မြို့ လမ်း​တွေကို မကျွမ်းကျင်​ခဲ့ရင်​…..? ? ? အကယ်​၍ ကျမသာ ..​မြောက်​ဥက္ကလာလမ်း​တွေကို မကျွမ်းကျင်​ခဲ့ရင်​.. ..? ? ?အကယ်​၍ ကျမတပည့်​သာ..သူ့အ​ဖေကို ​ရွှေ​ပေါက္ကံအ​ကြောင်း မ​မေးဖြစ်​ခဲ့ရင်​……? ? ?
အကယ်​၍ တံတား​လေးသာ ကျိုးမ​နေခဲ့ရင်​…..? ? ?အကယ်​၍.. တံတား​လေးကိုသာ ဖြတ်​ပြီးသွားရင်​….? ? ? ? ?
(ခု …post ကို ကား Owner ပဲ မြင်​မြင်​​မောင်းတဲ့ Driver ပဲ မြင်​မြင်​ကျမဖက်​က Welcome ပါ…
တရားရုံး နဲ့. ကျမရဲ့ အ​မေး​တွေကို ​ကောင်း​ကောင်း​ဖြေဖို့ပါ တခါတည်း ပြင်​ဆင်​ ထားပါ )
Taxi သမားရဲ့ လူသတျ​ပစ်စညျးလုဖို့ ကွံစညျ​တာခံရခဲ့ရတဲ့ ဖွဈရပျတဈခု
“ကားသမားက ..ကမြ၊​ဖေ​ဖနေဲ့ သမီး​လေးကို.. လူသတျ​ပစ်စညျးလုဖို့ ကွံစညျ​တာခံရပါတယျ​..”
ကမြ ခါး​ကွောညပျ​လိုကျ​တာ ည​နေ ၅နာရီ ..​တျော​​တျော​ ဆိုး​တော့ပွဖို့ စံပွ​ဆေးခနျး စုံစမျးလိုကျ​ပါတယျ​.”.သမိုငျးက ဆရာဝနျ​လာ/မလာ မ​သခြောတဲ့”ဒါနဲ့ ​ကြောကျ​​မွောငျး ​ဆေးခနျးက ည ရနာရီ ပါ​မောက်ခ ဦးသနျးတိုး ကိုပွဖို့ booking ရပါတယျ​.. . ပွပွီး တခါတညျး​လကေ့ငျြ့​ခနျးပါ လုပျ​ရ​တော့ ၉နာရီအဲ့အခြိနျ​…Taxi ငှါးပါတယျ​..
၃ရဂိတျ​(၆ထပျ​ရုံး)ကို ပို့ခိုငျး​တော့ ဂိတျ​သိမျးသှားပါပွီ .. . ဒါနဲ့ ကားသမားကို ​မှျော​ဘီ ထိ ငှါးလိုကျ​ပါတယျ​…ကားသမားနဲ့​စြေးတညျ့​​တော့ …. ဆူး​လကေ​နတေဆငျ့​ သမ်မတ ရုပျ​ရှငျ​ရုံ …အဲ့က​နမှေ တဆငျ့​ အထကျ​ပုစှနျ​​တောငျ​..စကျ​စမျး ..သင်ျကနျးကြှနျးဖကျ​ ​ချေါသှား ပါတယျ​…​ဖေ​ဖကေ ရနျ​ကုနျ​ မှာ​ကြောငျးတကျ​ခဲ့သူ …ဘယျ​​ရောကျ​​နတေယျ​ ဆိုတာ တလမျးလုံး​ပွောလာတာ​တောငျ​…အတငျ့​ရဲလိုကျ​တဲ့ …ငရဲ ကမြယျ့​​ကောငျ​…
​မေး​တော့ “အပွနျ​ သူတဈ​​ယောကျ​တညျး မို့ သင်ျကနျးကြှနျး အ​ဖျော​ ဝငျ​​ချေါတာတဲ့…”ထားလိုကျ​​တော့.. .​ချေါပါ​စေ…
သူလဲ အပွနျ​အတှကျ​​ပေါ့..သူငယျ​ခငျြး ​ချေါပွီး ​မောငျးလာတယျ​..သုဝဏ်ဏအားကစားကှငျး…ပငျ​လုံအိမျ​ရာ.. ပွညျ​​ထောငျ​စုရိပျ​မှနျ​ …
​နရော​တှကေို ဖွတျ​…​နောကျ​ဆုံး (၈၇) ကား​တှေ ဂိတျ​ထိုးထားတဲ့​နရော…​​ရောကျ​​နပွေီ မသင်ျကာ​တော့ဘူး…
တပညျ့​​ကြျော​ ဇငျ​လငျးကို ကို လှမျး​မေးတယျ​..သူ့​ဖေ​ဖေ ..က….ကား​ထောငျ​ပွီး taxi ဆှဲ​နေ​တော့ လမျးကြှမျးတယျ​..သူကလဲ သူ့​ဖကေို ​မေး​နခြေိနျ​ …ကမြတို့က ကား​မောငျးတဲ့ အ​ကောငျ​ကို ​မေးလိုကျ​ပါတယျ​”မငျး ခု ဘယျ​လမျးက​နသှေားတာလဲ” လို့ ..”လူပွတျ​တဲ့လမျး​တှခေညျြးပါလား” လို့ ​ပွော​လိုကျ​တယျ​..”ကြ​နျော​ က ​ရှေ​ပေါက်ကံ ဖကျ​က သှားတာတဲ့”
​”​နပေါအုံး.. .​ရှေ​ပေါက်ကံက​နေ ဘယျ​ဆကျ​သှားမှာလဲ လို့​မေး​တော့ “ပုလဲမွို့သဈ​”တဲ့…ဒါဆို ​အောငျ​မင်ျဂလာအ​ဝေး​ပွေး​ရှကေ့ လမျးမကွီးက​နသှေား​လကှော” လို့ “ခု အဲ့လမျးမကွီး​ပျေါကို တကျ​လိုကျ​…ခု ​အောငျ​မင်ျဂလာ ​ရောကျ​ပွီလား” ​လို့ မေး​တော့
“​အောငျ​မင်ျဂလာ ​ကြျော​​နပွေီ.”တဲ့…”ဘယျ​လို …​အောငျ​မင်ျဂလာ​ကြျော​​နေ​သေး…ပုလဲ မွို့သဈ​လဲ မ​ရောကျ​ ဆို​တော့.. .မငျးက ခု ဒီ​နရောက​နေ…လမျးမကွီး​ပျေါ ထှကျ​ရငျ​ ဘယျ​နား​ရောကျ​မှာလဲ …”လို့ ​မေးလိုကျ​​တော့…”​ဇကေမ်ဘာ​ဆောကျ​လုပျ​​ရေး..က​နေ ဖွတျ​မှာတဲ့…”ဘုရား​ရေ…ကမြသိတာ​ပေါ့ ..​ဇကေမ်ဘာ​ဆောကျ​လုပျ​​ရေး ဝနျး ဆိုတာ လူအရမျးပွတျ​တာ….​ပွောရငျး ဆကျ​သှား​တော့ ​ရှေ​ပေါက်ကံက​နေ တံတား​လေးကို ဖွတျ​ဖို့ အလုပျ​….​​မွောငျးတခုကို ဖွတျ​ထိုးထားတဲ့ တံတားက ကြိုး​နတေယျ​..ဖွတျ​မရ​တော့ ​မွောငျး​ဘေး တဈ​​လြှောကျ​ကို ခကျြ​ခငျြး ​ကှလေို့ကျ​တယျ​…
ညာဖကျ​ကို​ပေါ့ ဘယျ​ဖကျ​က အမှိုကျ​ပုံကွီး… အမှိုကျ​​ကောကျ​လူငယျ​ နှဈ​​ယောကျ​ရှိ​နတေယျ​.. အဲ့ဒီတော့ ညာဖကျ​​ကှရေ့တယျ​.ညာဖကျ​က မှောငျ​မိုကျ​​နတေဲ့လမျး..လူ​နအေိမျ​​တှနေဲ့အလှမျး​ဝေး​နပွေီ …​ကှမေ့ရဘူး.. ခဲဗွုတျ​​တှေ …သံတိုသံစ အပုံကွီးနဲ့..ပိတျ​​နေ​တော့ အတငျးတိုး​နေ​သေးတာ..ကိုယျ​​တှေ ဆီကိုလဲ ဇငျ​လငျးကို ​ရော…သူ့​ဖေ ​ရောက ဖုနျးလာ​နပွေီ…Speakerဖှငျ့​​ပေးထားလိုကျ​တယျ​…”ဆရာမ …ဆငျး​တော့…​ရှေ​ပေါက်ကံ​ရောကျ​စရာ အ​ကွောငျးမရှိဘူး..​ဇကေမ်ဘာ​ဆောကျ​လုပျ​​ရေး ဝနျးထဲက ဖွတျ​စရာကို အ​ကွောငျးမရှိတာ…တဲ့”
ကားသမား ကလဲ မူပကျြ​​နပွေီ…အဲ့အခြိနျ​…ကမြနဲ့ ​ဖေ​ဖကေို့ ​အျော​တယျ​..”ခငျ​ဗြား တို့ လုပျ​တာ နဲ့ လမျးမှားကုနျ​ပွီတဲ့..”ဖုနျးထဲကလဲ ဦး​လေး က ပွနျ​​အျော​တယျ​…​ဖေ​ဖကေလဲ ထ​အျော​​နပွေီ..”ဟ​ရောငျ​…မငျး ကားတံခါး lock ခထြားတာ..ဖှငျ့​စမျး…”ဆငျးမယျ​ ဆိုပွီး လုပျ​​တော့.. back ပွနျ​ဆုတျ​ ..လာရာလမျးပွနျ​ထှကျ​လာ​တော့ …ရပျ​ကှကျ​ထဲက လကျ​ဖကျ​ရညျ​ ဆိုငျ​​လေးရယျ​ ကုနျ​စုံဆိုငျ​​လေးရယျ​ က ပိတျ​ဖို့စီစဉျ​​နခြေိနျ​ ဝိုငျးအုံကွညျ့​​တော့ လနျ့​ပွီးခြ​ပေးလိုကျ​တာ..
ခြ​ပေးတာက လမျးခှဲ​လေးတ​နရော… .”လမျးမ​ပျေါခြ​ပေးခဲ့မယျ​တဲ့..”.. “မလိုကျ​ဘူး လို့…”ဆငျးခဲ့​တော့ ကုနျ​စုံဆိုငျ​​က မိသားစု​တှကေ ဝိုငျးကူညီကွတယျ​..ဖွဈ​​ကွောငျးကုနျ​စငျ​ ​ပွောပွ​တော့… သူတို့မိသားစုက ​ပွောတယျ​…”အဲ့ဒါ တကယျ​ပဲ လမျးမှားသှားလို့…တဲ့ကမြတို့ ခု ဒီလမျးခှဲက​နေ ​ဟိုဖကျ​မှာလဲ ​ဇကေမ်ဘာထဲဝငျ​တဲ့တဈ​​ပေါကျ​ရှိ​သေးတယျ​ တဲ့ …အထဲ​ရောကျ​တာနဲ့ ​မှောငျ​မညျး ​နပွေီး.. ၄​လောငျးပွိုငျ​၅​လောငျးပွိုငျ​​တှေ အသတျ​ခံထားရတဲ့​နရောကွီး..တဲ့..
ဟိုတံတား​လေးကလဲ ကြိုး​နလေို့တဲ့မကြိုးလို့ ဖွတျ​လိုကျ​တာနဲ့ ​ဇကေမ်ဘာထဲ ​ရောကျ​ပွီတဲ့…”ဇငျ​လငျးကို တို့ သားအဖကလဲ ​မှျော​ဘီ က​နေ လာကွို​နပွေီ…ကမြတို့ သားအဖနဲ့ သမီး​လေးလဲ… ​ဘေးကငျးသှားပွီ..အိမျ​ဦးနတျ​ ကလဲ အ​ဝေးတ​နရောက​နေ ဖုနျးတဂှမျ​ဂှမျ​ဆကျ​ စိတျ​ပူ​နပွေီ….ခု ည ၁၂ အတိမှ ​မှျော​ဘီ အိမျ​ကို ပွနျ​​ရောကျ​ပါတယျ​….
ကမြတို့ ကို တကယျ​ပဲ ကွံစညျ​ခဲ့တာ…လူယုတျ​မာ…ကမြ မနကျ​ဖွနျ​.. ကညန က တဆငျ့​ Owner ကို ရှာမှာပါ..အငှါး​မောငျးသူ ဖွဈ​​နရေငျ​ သတိထားဖို့ အ​ကွောငျးကွားပါမယျ​.. အဲ့ကားက​နေ တခွားကား​ပွောငျး​မောငျးရငျ​​တော့.. ? ? ?အားလုံး ပဲ သတိ / ဝီရိယ ထားကွပါ…ကမြက ခါး​ဆေးခနျးပွလာတဲ့ ဂီလာန၊ ကမြ ​ဖေ​ဖကေ က​လေး​လေး ခြီထား​တော့ … သင်ျကနျးကြှနျးမသှားခငျ​ကတညျးက အကွံရှိပုံပါပဲ…
ကမြတို့ ​မွေးအဘိုး ၃​ယောကျ​ ​သေ​ဘေးက သီသီ​လေး လှတျ​ခဲ့ပါတယျ​…တံတား​လေးကြိုး​နတောကို ​ကြေးဇူးတငျ​မိပါတယျ​…မနကျ​/ည​တှေ ပဌာနျးရှတျ​…ဘုရားတရား လုပျ​​နခေဲ့မိတာ​တှအေတှကျ​…. မမွငျ​ရတဲ့ နတျ​​ကောငျးနတျ​မွတျ​​တှကေို ​ကြေးဇူးတငျ​ပါတယျ​.. ….”အားလုံး ပဲ…Grab ကိုပဲ ငှါးစီးကွပါ…ကမြလို သတိလကျ​လှတျ​မဖွဈ​မိပါ​စနေဲ့…အကယျ​၍.. .. ​ဖေ​ဖသော…ရနျ​ကုနျ​ မွို့ လမျး​တှကေို မကြှမျးကငျြ​ခဲ့ရငျ​…..? ? ? အကယျ​၍ ကမြသာ ..​မွောကျ​ဥက်ကလာလမျး​တှကေို မကြှမျးကငျြ​ခဲ့ရငျ​.. ..? ? ?အကယျ​၍ ကမြတပညျ့​သာ..သူ့အ​ဖကေို ​ရှေ​ပေါက်ကံအ​ကွောငျး မ​မေးဖွဈ​ခဲ့ရငျ​……? ? ?
အကယျ​၍ တံတား​လေးသာ ကြိုးမ​နခေဲ့ရငျ​…..? ? ?အကယျ​၍.. တံတား​လေးကိုသာ ဖွတျ​ပွီးသှားရငျ​….? ? ? ? ?
(ခု …post ကို ကား Owner ပဲ မွငျ​မွငျ​​မောငျးတဲ့ Driver ပဲ မွငျ​မွငျ​ကမြဖကျ​က Welcome ပါ…
တရားရုံး နဲ့. ကမြရဲ့ အ​မေး​တှကေို ​ကောငျး​ကောငျး​ဖွဖေို့ပါ တခါတညျး ပွငျ​ဆငျ​ ထားပါ )
March 19, 2018 Apann Pyay Comments Off on သတင်းထူး.. ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးတွင် လူသတ်ပြီး ကားကိုယူမှုဖြစ်..။ ကားသမားများ သတိရှိဖို့လိုပါပြီ..။
သတင်းထူး.. ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးတွင် လူသတ်ပြီး ကားကိုယူမှုဖြစ်..။ ကားသမားများ သတိရှိဖို့လိုပါပြီ..။
ရန်ကုန်-ချောင်းသာ သွားတဲ့ Taxi ကားသမားတစ်ဦး အသတ်ခံရပြီး ကားကိုပါယူသွားခံရ ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၉...